UPetru noPawulu Cathedral eMoscow, incazelo, umlando, izithombe. Kanjani ukuze baye khona?
Moscow idume ababhishobhi balo abaningi futhi amasonto. Ezinye zazo, sibonga bokwakhiwa kwezindlu zayo eziyingqayizivele kanye umhlobiso ingaphakathi, is kulo lonke izwe elalaziwa, abanye - nesizotha, kodwa akukho esingaphansi abathandwa Muscovites. Nokho, abayivezi ngaso sonke isikhathi ukuletha izivakashi, isakhiwo ngasinye esinjalo lesikhumbuzo elihle umlando izakhiwo zesonto Russian.
Namhlanje ukukunikeza ukuya Starosadsky kwindlela lapho isakhiwo omangalisayo, okuyinto ikhanga izivakashi. UPetru noPawulu Cathedral eMoscow (esithombeni bona ngezansi) injalo zamanje senziwa ngesitayela eclectic. Nokho, kuyinto izitshengiselo ezibonakalayo kahle Gothic, Roman nezitayela yesimanje.
UPetru noPawulu Cathedral eMoscow: umlando
umlando Inxanxathela lombhishobhi waqala ngo-1817, lapho umphakathi isonto wathenga ise Lopukhins indawo izindlu futhi waqala kabusha kube isonto, sokwakha Dome eyayibhalwe bese usetha iziphambano. Ngayingcwelisa isonto elisha ngo-1819.
Ngo-1837, ezakhiweni lombhishobhi okokuqala kwakuzwakala umsindo waphezulu isitho. UPetru noPawulu Cathedral eMoscow isibe zithandwa kakhulu kangangokuba wayengasakwazi kuhlaliswe zonke amalungu esonto umsebenzi wokuvuselela izakhiwo zalo. Esikhathini Maphakathi nekhulu XIX eseqala umsebenzi wokwakha, eyayiholwa umakhi A. Meyngard. Bona wadonsa kwaze kwaba ngu-1862.
Ngemva konyaka, umbhoshongo lombhishobhi insimbi ehlotshisiwe, eyethulwe uWilliam I. Isibalo besonto waqhubeka wanda. Nalapha futhi, wathatha Ukwanda kwaleli sonto. Kusukela ngo-1903 kuya ku 1905 kabusha emikhulu yesonto. Ekuqaleni, iqondiswa umakhi V A. Kossov, kamuva zaphumelela ukufaka ngesinyelela by A. F. Loleyt. Ibandla busisa ekupheleni 1905. Ngo-1915, isakhiwo elalisanda kulungiswa kakhulu ezilimele ngesikhathi ezimpini German. UPetru noPawulu Cathedral eMoscow, ngo-1918 waba sesonto.
Ithempeli emva 1917
Ngo-1924, isakhiwo Episcopal futhi Supreme Church Council washukumiseleka ukuba eMoscow. A ukushushiswa ngokwenkolo omkhulu kwaqala eminyakeni embalwa kamuva. eziyigugu Abaningi zisusiwe lombhishobhi, zafika-ke izinceku waboshwa futhi kamuva esingu.
Ngo-1938, uPetru noPawulu, Cathedral eMoscow lavuselelwa futhi ibekwe ngaphansi yaseshashalazini. Kamuva wathunyelwa studio "wefilimu". Directorate studio nomthelela ezinjenge lesi sakhiwo. Ngenxa yalokho, ingaphakathi isonto labhujiswa cishe ngokuphelele.
Phakathi nempi, umzimba lombhishobhi lasendulo uthuthwa eNovosibirsk, ngesikhathi Opera House. Lapho, adiliza, ingxenye yayo esemqoka wathunyelwa Scrap, futhi ezinye izingxenye zazisetshenziselwa umhlobiso. Namuhla, ithempeli phambi kwe-altare isethi akuyona isitho ingabi yigugu, futhi lapho senziwa 1898 enhlanganweni ngobukhulu ekukhiqizweni la mathuluzi e-Germany - inkampani Vilgelma Zauera.
Ekuqaleni wayephikisa eMoscow Church of St .. uMichael. Lapho, ngo-1928 wavalwa, umzimba iyiswe Donskoy Monastery, lapho eseneminyaka esitolo bagcinelwe edabukisayo - umsebenzi ehholo lapho kushiswa khona izidumbu. Ngo-2006 Reinhardt Hyufken, inkosi enkulu evela eJalimane, futhi waba kulungiswe enkulu leli thuluzi. Namuhla, kuzwakala omkhulu, futhi phakathi nokukhulekela, nogwali bukhoma umculo, aphethwe ethempelini njalo futhi abangele isithakazelo esikhulu Muscovites.
Umlando yamuva yesonto
Kuphela Meyi 1991 amaLuthela eMoscow wadala iqembu isinyathelo futhi bezithoba UMnyango Wezobulungiswa imibhalo dolobha. Ekuqaleni kuka-June asabele kahle yatholwa lowo nyaka. EMoscow City Council uye wanquma kancane kancane uthumele isakhiwo kumphakathi lamaLuthela. Nokho, lokhu ngeke kwenzeke ngokuphazima kweso.
Studio "wefilimu" engasasetshenziselwa kwaba ngo eziyinkimbinkimbi isonto, ukuhlinzeka indawo ukwenza izinkonzo zenkolo, ushiye isakhiwo ngokuphelele, futhi ithempeli, kabanga.
Ngo-May 1992, umphakathi wathola indlwana, lapho kuqala babe workshop studio, futhi baqala kabusha. NgeSonto lePhasika ngo-1993, leli sonto lanikezelwa, futhi kuze 1998 bafeza inkonzo. "Wefilimu" Lo studio ngokugcwele ekhulule Insimu eziyinkimbinkimbi isonto e-1997.
Kuyaphawuleka ukuthi izimali wokubuyiselwa lombhishobhi akutholakali kuphela amakholwa bendawo, kodwa langenduduzo abathembekile e-Europe. usizo olunzulu enikeziwe esibhekile ekwakheni kabusha neziphathimandla zedolobha ethempelini. Phakathi lombhishobhi ekuvuselelweni, ukunakwa okukhulu sakhokhwa ezizungezile. Yard sisusiwe izingqimba zisetshenziswa i-asphalt kwendawo egandaywe ngamatshe, wawisa ezingeni 1905. nomsebenzi wokuvuselela umhlaba ngemva kwaqhubeka waze 2005. Kuphela wabhubhisa Spire lavuselelwa kamuva kakhulu - ngo-2010. Isikhathi sokugcina ibandla abazinikele e 2008.
UPetru noPawulu Cathedral eMoscow: kanjani lapho?
Ithempeli itholakala kuleli kheli elilandelayo: Starosadsky Lane 7/10. Namuhla, izivakashi bayanda edolobheni ufuna ukubona uPetru noPawulu Cathedral eMoscow. Kanjani ukuze uthole on the esitimeleni ukuze kuleli thempeli? Isiteshi eliseduze lombhishobhi - "China Town", itholakala ingcosana "Lubyanka".
Kusukela "China-edolobheni" ukuba eliqhutshwa inombolo trolley ibhasi 25 noma inombolo-45 ukuba bayeke "kwindlela Armenia." Kusukela stop nihambahambe kancane ethempelini. Kungokufanayo ezokuthutha izixhumanisi futhi kusukela esiteshini "Lubyanka".
Ukuguqulwa KukaJesu Isimo leNkosi umlando nokuhlanganyela kulelo holide. Apple uMsindisi - isimo leNkosi
Yini okufanele ibe umkhuleko ingane
Indlela bashise Man ocingweni e owokuqala azwakale kamtoti
Indlela yokwenza soda ekhaya ngaphandle kokuchitha kakhulu?
Uyini umthamo futhi ikhono
Kumiswa apula umqhele - adingekayo ezolimo
Kanjani ukwakha histogram Excel neZwi
Izinhlobo iqiniso ulwazi zefilosofi
Sibhedlela "Lenevka": izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa eziyiqiniso
MikroTik, i-WiFi: kulungiselelwa. MikroTik RB2011UAS-2HnD-IN: Ukuhlelwa kwe-WiFi. MikroTik RB951G-2HnD: kulungiselelwa WiFi